WAKAPI KUSHANYIRA ANTIGUA NEBARBUDA ISLANDS | AAAA Murairidzi ªº
PANGUVA YOKUSHANYIRA ANTIGUA NEBARBUDA ISLANDS
nemunyori: Maxim Chernyshkov Kubvumbi 29, 2021
Mahombekombe eAntigua neBarbuda akavhurika kushanyira gore rese, nekuti tembiricha yemvura haina kudzikira pazasi + 24. Zvisinei, kune mwaka wemvura, unogara kubva muna Chikumi kusvika Mbudzi uye unogona kukanganisa zvishoma zvese.
Nguva yekushanyira zviwi zveAntigua neBarbuda
Mahombekombe eAntigua neBarbuda akavhurika kushanyira gore rese, nekuti tembiricha yemvura haina kudzikira pazasi + 24. Zvisinei, kune mwaka wemvura, unogara kubva muna Chikumi kusvika Mbudzi uye unogona kukanganisa zvishoma zvese. Naizvozvo, yakanyanya kunaka nguva yekushanyira nyika yechitsuwa kubva munaZvita kusvika Chivabvu.
365 mahombekombe eAntigua
Zvisinei, hazvibviri kusarudza imwe nzvimbo yekugara. Antigua inozivikanwawo nenyaya yekuti pane chaipo mazana matatu nemazana matatu emabhishi, akachena, akashongedzwa zvakanaka uye ane mavara, rimwe kwezuva rega rega regore.
Izvi zvinoreva kuti hauzomboneta nekuzorora pano. Vemunharaunda vanoda zviwi, zvakasarudzika hunhu uye musango, zvekunze chikafu uye zuva-rakanyorova mweya. Chikamu chekuchamhembe cheAntigua, chinozivikanwa seDickenson's Bay, chiri kumba kune akawanda mahotera, nzvimbo dzekutandarira uye mahombekombe akazara. Fans yezororo rakavanzika uye rinozorodza vachada mahombekombe ari kumaodzanyemba kwenyika, akasiyiwa uye akavharika. Kudhiraivha, kufefetera kwemhepo, kufema snorkeling uye hove yepasi pemvura zvakanakisa munzvimbo dzechisikigo nemumachiteshi echisikigo, ayo akazara munzvimbo dzakasiyana dzeichi chitsuwa.
Mahombekombe akanyanya kubatikana ndiDickenson Bay uye Runaway Bay. Inowanikwa pane inofadza kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwechikamu chechitsuwa, mahombekombe ari kudiwa pakati pevechidiki uye vanofarira mapato-vanoenda vakagadzirira kunakidzwa maawa makumi maviri nemana pazuva. Zvishoma zvishoma zvine ruzha, asi zvakakurumbira, mahombekombe akavhurika "Fort James" uye "Deep Bay", ayo akazarawo.
Antigua neBarbuda Beach - Halley Bay inoonekwa seyakakodzera sarudzo yekufema kwehunyanzvi.
Paunenge uchizorora pazvitsuwa hazvigoneke kupfuura mhenderekedzo ina dzakaumbwa - "Haxbil", imwe yacho iri paradhiso yenudist.
Iyo yakadzikama uye isina kuzara kumahombekombe ekumaodzanyemba kwechitsuwa ichi inogara kumakiromita gumi nemashanu emahombekombe epingi epingi: Freise Bay, Duckwood Beach uye Johnson Point.
Vanoda zverudo vachada iyo yakavanzika Rendezvous Bay uye Gungwa reDoig. Mahombekombe akanaka kwazvo anozivikanwa se "Pigeon Point", iri padyo nechiteshi chepasi rose cheyacht mu "English Bay".
Iyo Half Moon Bay beach yakagamuchira chinzvimbo cheNational Park, inoonekwa senzvimbo yakakodzera yemhuri.
Pano unogona kusanganisa bhizinesi nekunakidzwa uye bhuku kushanya kwepaki.
Kune mhuri dzine vana, Long Bay zvakare yakakodzera, ine runyararo mahombekombe uye matombo emakorari anochengetedza gungwa kubva kumafungu ane simba, kudhiraivha uye snorkeling zvinotenderwa. Pazvitsuwa zveAntigua neBarbuda, kune mamwe mahombekombe akati wandei ane mvura yakadzikama uye nzvimbo dzinoshamisa, dzakakodzera zororo.
Galli Bay nemhenderekedzo dzepedyo zviri kudiwa pakati pevanofarira kufambisa. Munguva yechando, mafungu ane simba anoonekwa pano, saka zvinodikanwa pakudzidziswa kwakanyanya. Inonyanya kukwezva vashanyi uye ikava mahombekombe emusango padyo neCape Johnsons. Vanoda zvekushanya vanofanirwa kushanyira inoyevedza, yakanyarara asi isingasvikike nzvimbo padhuze neRendezvous Bay.
Iyo inonyanya kufarirwa mhenderekedzo, zvese zviri pakati pevagari vemo uye pakati pevashanyi vezvitsuwa zveAntigua neBarbuda, ndiyo Doigs beach.
Nzvimbo inonyanya kudiwa pachitsuwa ichi Peacock Point nemabhishi ari padyo.
Dhiyabhorosi Bridge uye Nelson-Dockyard
Kumahombekombe ekumabvazuva erudzi rwechitsuwa, kune chimwe chinokwezva icho muenzi wese weAntigua anofanirwa kushanyira. Iyo yakanaka matombo kuumbwa, inonzi "Dhiyabhorosi Bridge" kana "Dhiyabhorosi Bridge", ichave chiitiko kune wese munhu, nekuti vanhu vakashinga chete vane hutano hwemuviri vanogona kukwira.
Ndiri munzira, pamativi ese ebhiriji revafambi, ini ndinofukidza mafafaya emafungu achirovera pamatombo. Nyanza iri kufadza mberi.
Paunenge uri pachitsuwa, tora nguva yekushanyira Chiteshi cheChirungu, kwete chemahombekombe, asi kufamba-famba mumamiyuziyamu ari pedyo, mashopu nemaresitorendi. Nelson Dockyard Harbor inoonekwa senzvimbo yekukwezva varidzi veyacht uye iri muenzaniso wechiNgezi chikepe chengarava chezana ramakore rechi18.
Sezvo ruzhinji rwevagari venyika vanogara muAntigua, Barbuda inongori chete 2% yevagari. Kunyangwe yakasarudzika hunhu, inopisa mamiriro ekunze uye mutsa wevagari, nzvimbo ino haiwanzoshanyirwa nevashanyi.
Svika pachitsuwa ichi neakahaya motorboat kana helikopta tekisi. Vanhu vanonyanya kuda vachada regatta, inozivikanwa nevashanyi uye vagari vemo zvakafanana. Caribbean Sailing Vhiki inoitwa gore rega rega mukupera kwaKukadzi uye kutanga kwaKurume. Vese vanouya vanotora chikamu mairi. Tarisa whale kutama kubva chero yemakumi matatu nematanhatu emahombekombe muAntigua iwe uchimhanya.
Nzira Yokuwana Nayo Ugari hweAntigua neBarbuda
nhasi Antigua neBabuda Citizenship iri nyore kuwana, nekuda kwechirongwa, icho chakaongororwa nemazana evamwe vedu.
Kuvhura mikana isingaverengeke yevagari vatsva venzvimbo yechitsuwa, pasina mapepa nemitsetse, isu tinobatsira kuwana ugari hweAntigua uye nekupa zvido zvehupfumi kune iri kusimukira nyika yekunze.
Nzira iri nyore yekuwana hunhu hweAntigua ndeyekutenga zvivakwa, kuve muzvinashawo ($ 400) kana kutenga zvisungo zvehurumende.
Bhenefiti yeDual Ugari
Kuwana ugari hweAntigua neBarbuda (kuva mugari wechipiri) nerubatsiro rwekambani yedu kune zvinotevera:
Ruzivo rwunopihwa nezve iye anenge achinyorera uye nhengo dzemhuri (wechipiri mukadzi, vana vari pasi pemakumi maviri nemashanu) vanogara naye inogadziriswa munguva ipfupi inogoneka (inosvika kumwedzi mitatu);
Iko hakuna kudikanwa kwekushanyira zviwi kuti uwane ugari hwenyika;
Iko hakuna kudikanwa kwese kwenzvimbo yekugara kweanokumbira uye yehunhu hunhu (dzidzo, manejimendi ruzivo, nezvimwewo);
Vagari vemuAntigua vanogona kufamba vakasununguka kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe (hutongi husina vhiza kuenda kune nyika 130);
Wakawedzerwa mikana yekuita bhizinesi mune imwe nyika pasina kubhadhara mutero wemari;
Chiyero chekodzero dzekuva mugari wechipiri pasi pechirongwa chekudyara hachina kusiyana nekwaniso yekodzero dzevagari vemunharaunda
Kuwanikwa kwezvinhu zvekushandisa hakusi 100% vimbiso yekuwana ugari hweAntigua neBarbuda. Iye anenge achinyorera acharambwa kana paine chinyorwa chematsotsi (kupomerwa mhosva), kana paine njodzi kune mukurumbira wenyika (nekuda kwekuzivikanwa kweanokumbira), uyezve kana muzvinashawo ari mugari wenyika ine chibvumirano pamusoro pehutongi husina vhiza chakasainwa. Iwe unogona kuve mugari weAntigua kungave nekushandisa chirongwa chekudyara kana pakuzvarwa. Naizvozvo, vana vanozvarwa pazvitsuwa vanove vanotongwa nedunhu rechitsuwa zvoga.
Vakadzi nevarume vanove vakaroora vemugari wemuAntigua mushure memakore matatu kubva pazuva rekunyorwa kwekuroora kana vakaita hukama nevagari veBritish mushure memakore manomwe vanozoita mashandiro anova nyaya.
Nekudaro, kuisa mari muzvivakwa kunoonekwa sechisarudzo zvine musoro. Antigua neBarbuda ugari hunosara kwehupenyu hwese. Sezvo nyika yechitsuwa iri chikamu cheBritish Commonwealth, vagari vemuAntigua vanowana mabhenefiti muUnited Kingdom uye vanogona, semuenzaniso, kudzidza kuEngland.
AAAA ADVISERERI ichakubatsira iwe kuve mutora chikamu mumabasa ekudyara munyika dzinofarira kuwana vanhu vakazvimiririra mune zvemari. AAAA ADVISERERI inzvimbo ine rezinesi yezvirongwa zvehugari hwepamutemo zvichibva mukudyara nevanoenda. Pano iwe uchagamuchira rubatsiro uye nyanzvi kuraira pane ese nyaya ekuwana pekugara mvumo kana Citizenship neInvestment.
Bata nyanzvi yedu uye isu tichakupa zano pane ese sarudzo dzekuwana mvumo yekugara, kugara zvachose uye Second Citizenship + 79100007020
Shanyira yedu saiti izere: VNZ.SU
↑ Antigua ↑ Barbuda ↑ Antigua naBarbuda ↑ Mwaka muAntigua neBarbuda ↑ Nguva yekuenda kuAntigua neBarbuda ↑ Antigua neBarbuda mahombekombe ↑ Mahoridhe muAntigua neBarbuda ↑ Antigua neBarbuda Citizenship ↑ Zvikonzero zvekuramba Antigua neBarbuda Citizenship ↑
© 2021, 💣 ✓ Pane iyo Shopify chikuva